Home Wararka Nidaamka Federaalka Soomaaliya waa in laga Badbaadiyaa Kalitalisnimo
Maqaalkan waxaa uu Madaxweynihii hore ku qoray Hiiraan Online oo aan ka soo qaadannay. Maqaalka oo dhan halkaan ka akhriso.
Doodeydu maahan in wax waliba ay taam ahaayeen intii aan xilka hayay laakiin iyadoo haatan la joogo sannadka 2022, Soomaaliya waxay ahayd ineysan u nuglaan halista al-Shabaab. Waxay ahayd in hore loo sii wado nidaamka dowliga ah ee federaleynta dalka. Ayaan-darada ugu weyn waxay tahay in muddadii u dhaxeysay 2017-kii ilaa 2022 ay ahayd fursad luntay oo lagu dhammeystiri karay isku dhafka ciidamada Soomaaliyeed, la dagaalanka Al-Shabab iyo in laga abuuro dalka gudihiisa deganaanshiyo siyaasadeed si looga faa’ideysto fursadaha dhaqaale ee ka dhashay dib-u-habeynta maaliyadda dalka kuwaas oo ay dowladii aan hoggaminayey ay bilowday sannadkii 2015-kii.
Amniga ayaa faraha ka sii baxaya. Hay’adda sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka ee la siyaasadeeyay ayaa gaartay heer ay si toos ah baraha bulshada uga digaan khatar khaarijin ay ku shegeen in Al-Shabaab ku beegsaneyso Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble. Khatartani ay sheegtay NISA ma la isku halayn karaa mise loogu talo galay in looga danlahaa dib u dhac kale ee doorashooyinka? Si kastaba ha ahaatee, Hay’ad Nabadsugidd Qaran oo la siyaasadeeyay waxay halis ku tahay dadka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waa dal meel istiraatiiji ah ku yaala, oo ay suurtagal tahay inaan noqonno xarun ganacsi oo caalami ah iyadoo laga faa’iidaysanayo kheyraadka kale duwan ee Alle nagu maneystay. Si kastaba ha ahaatee, si arrimahan loo gaaro, waxaan u baahannahay inaan ka gudubno iska-horimaadka loona gudbo wada-shaqeyn ay yeshaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka.
Previous articleHaweenka Somaliyeed Ma Heelen Doorkey ka Mudnayeen dalka?
Next articleGuddiga FEIT oo go’aan ka gaaray halka ay ka dhaceyso doorashada kursigii Aamina
Dowlada Imaaradka Carabta oo Gargaar isugu jira Qalab caafimaad iyo Daawooyin...